बुद्ध लामा र सागर आले बीचमा प्रतिष्ठाको लडाई कस्ले बाजी मार्ला ?(भिडियो सहित ) Buddha VS SAGAR – Enepali Online
Enepali Online | August 29, 2017 | News, Video | No Comments
देशमा यतिबेला नेपाल आईडलको चर्च छ । कारण नेपाल आईडलमा चार जना हस्ती भिड्दै छन् । धेरैपछिको छनौट पछि ४ जना फाईनलमा प्रवेशका लागी भिडिरहेका छन् ।
अबको हप्ता को को फाईननलमा जान्छन् त्यो हेर्न बाकी छ । फाईनल कतारको दोहामा हुने भनिएकोले पनि यसको रौनक अझ बढ्दै छ । फाईनल प्रवेशका लागि बिराटनगरका निसान भट्टराई, चितवनका सागर आले, पोखराका बुद्ध लामा र काठमाण्डौंका प्रताप दासबीच कडा टक्कर छ ।
सबै भन्दा बढी समाजिक संजालमा बुद्ध लामा र सागर आले मध्ये एक नेपाल आईडल बन्नु पर्नेमा जोड तोडका साथ समाचार र भिडियोहरु बाहिर आईरहेका छन् ।
हुन त बुद्ध लामा जनजाती हुन, सागर पनि जनजातीभित्रै पर्छन् । इतिहासलाई हेर्नहो भने पनि जनजातीहरुले आफ्नो बंशलाई राम्रो सपोर्ट गरेको देखिन्छ । उनीहरु पैसा खर्च गरेर आप्mनो मन्छेलाई ठाउंमा पु¥याउन पछाडी पर्दैनन् । हो यस्तै देखिएको छ, पछिल्लो समय नेपाल आईडलमा पनि ।
बुद्धलामा पोखराका हुन् उनीलाई जिताउन पोखरा तातेर लागेको छ । पैसा संकलन कार्य र भोट माग्ने कार्य समेत अगाडी बढेका छन् । पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै पोखरामा सहयोगको लागी अपिल समेत गरिएको छ । रकम संकलनको कार्य समेत थालिएको बुझीएको छ । हेरौं आखिर कुन जनजातीले बढी भोट ल्याउला ? कि दुबै जनाले उपाधी नजित्लान ?
तीन करोड नेपालीको रगत तताउने गरी हेपेर बोल्ने सीमा सुवेदी विरुद्ध हाम्रा बर्मेली नेपाली युवाको आक्रोश। हेर्नुस भिडियो ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले उग्र रुप लिएसंगै भारत सरकारले नाकाबन्दी लगाएपछि दार्जीलिङबासीलाई नेपालको खाद्यान्न
नेपाल अाइडलबाट आउट भएपछि सागर आलेको पहिलो बयान